လူကြီးများအတွက်ခေါင်းစဉ်များ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးသမီးများအတွက်စအိုလိင် - သင်သိရန်နှင့်နားလည်ရန်လိုအပ်သောအရာများ
အပေါ် Posted 17.09.2021 17.09.2021
ယခုအခါလိင်၌စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့်လူကြိုက်များမှုပိုများလာသည်။ သို့သော်အကြွေစေ့၏“ နှစ်ဖက်” ရှိသည်။ စအိုနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့မိန်းကလေးတွေဘာသိဖို့လိုသလဲ။
အပေါ် Posted 01.12.2018 01.12.2018
သင်၏အစာအိမ်မှတဆင့်လူတစ် ဦး ၏နှလုံးသားသို့သင်သွားသောလမ်းကိုမလွန်မီမကြိုးစားပါနှင့်။ ရင်းနှီးသောရက်စွဲကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအစားအစာများရှိပါသည်။ ဗိုက်နာခြင်း၊ အသံထွက်ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ထွက်ခြင်း၊
အပေါ် Posted 01.12.2018
အမျိုးသမီးများအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏လိင်မှုကိစ္စသည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းနိုင်သည်။ libido နှင့်အပျော်အပါးလျော့နည်းခြင်းသည်အဓိကကျသောတိုင်ကြားချက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ အထူးအကဲဖြတ်ရန်သင့်သည်။
စအို။ သီအိုရီ, သင်တန်းနှင့်အလေ့အကျင့်
အပေါ် Posted 13.11.2018
သင်သည်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားလိုပါသလား၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ကြွက်သားများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာကျုံ့နေသလား။ အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များသည်ဂရိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်စတင်ခံစားခံစားနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည် သီအိုရီစအိုinရိယာတွင်အာရုံကြောများစွာရှိပြီးသူတို့၏လှုံ့ဆော်မှုသည် ...
မိန်းမဖြစ်ဖို့ခက်သလား။ မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခွန်းတစ်ခုဖြင့်ဖြေဆိုခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ သို့သော် ... ၀ င်ရန်ခက်ခဲပါသလော။ အမျိုးသမီးများသည်မွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်၊ သူတို့ရဲ့ကျား၊ မရေးရာကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည်ရောဂါတစ်ခုလား၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုကုသနိုင်ပါသလား။ အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းပြီးခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဂရုတစိုက်ချဉ်းကပ်သင့်လို့ပါ။
စစ်တပ်အတွင်း၌ဘရိုမိုင်းကိုပေါင်းထည့်ပြီးလက်ဖက်ရည်တွင်ထည့်သွင်းသည်မှာမှန်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဒဏ္aာရီတစ်ခုလား။ ဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကသူတို့ကငါတို့ဆီမှပိုသာယာလာသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ပါ။ ၁၈-၂၀ အထိဘရိုမင်သည်မည်မျှစားသုံးရန်လိုအပ်သည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်သည်။
ဘာမှမှသေးငယ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါ prizervativ နဲ့လား
သေးငယ်သောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြင့်ကွန်ဒုံးသည်အသုံးမဝင်ပါ။ လိင်တံသေးငယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမြုံနေပြီးဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဖခင်ဖြစ်မှုကိုဤဘဝအဆင့်တွင်မစီစဉ်ပါက၊
မူရင်းစာလုံးသုံးလုံးကိုဘယ်လိုပို့မလဲ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ် nickname ကို BV ၌သာသုံးပါသည်။ ငါထင်တယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်အတော်လေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တယ် ...
ဆေးလိပ်မသောက်သူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဆေးလိပ်သောက်လိုသနည်း ငါအကြီးအကျယ်မတော်တဆမှုရသောအခါငါဘဝမှာတစ်ချိန်ကဆေးလိပ်သောက်။ ငါငိုဖို့ခွန်အားမရှိဘူး၊ ကားနောက်ကွယ်ကပျက်နေတဲ့ကားကိုကြည့်လိုက်တော့ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ တိတ်တဆိတ် ...
အဘယ်ကြောင့်နွေ ဦး ရာသီ၌ဟော်မုန်းကစားကြသနည်း ရှည်လျားသော hibernation ပြီးနောက်, သဘာဝတရားအားလုံးနောက်ဆုံးတော့အသက်, အရွက်, ပန်းပွင့်နှင့်ဘူးသီးပွင့်မှလာ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပြင်မှာနွေးနေတယ် သဘာဝတရားအားလုံးသည်ဘဝသစ်တစ်ခု၏အစကိုထင်ဟပ်ပုံရသည်။ ချင်တယ်…
အဘယ်အရာကိုအိုင်ဗင် Kalita ၏သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသလဲ?
သမိုင်းကြောင်းတွင်လူသိများသော Ivan Kalita ကဘာလဲ? သူသည်မော်စကိုပြည်နယ်အတွက်ခန်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်သူသည်မဟာဘုရင်အဖြစ် Horde Khan ထံမှတံဆိပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိုတိုပြောရရင် ...
အဘယ်အရာကို pissing သလဲ?
pissing ဆိုတာဘာလဲ ဆီးအားဖွင့်နေသောလူများရှိသည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏ဆီးကိုသွန်လိုက်သည့်မိန်းကလေးများရှိသည်။ သူတို့ကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုလုပ်နိူင်တယ်၊ ရေးရုံပဲလုပ်နိုင်တယ်။
သင့်အတွက်“ မှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်” ကားမည်သူနည်း။
သတင်းစာ Self-ကာကွယ်ရေး + = ရေအိုင်လက်မှာကိုဆိုလိုသည်? မည်သူမဆိုကကြိုးစားခဲ့ကြပြီလော
Newspaper + puddle = ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ကြံဆခြင်းအားဖြင့်နည်း။ မည်သူမဆိုကြိုးစားခဲ့ပါသလား Delirium သည်ရူဘယ်ဒင်္ဂါးများကိုယူပြီးကော်လံကိုသင့်လက်ဖဝါးအတိုင်းအတာတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကိုဆေးဘက်ကပ်ကော်ဖြင့်ဆေးပတ်ပါ။
ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရာထူးကိုအမျိုးသမီးအများစုတွင်အဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်များသနည်း။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လိင်မှုဘ ၀ ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သူတို့သည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်သာသနာပြုရာထူးကိုနှစ်သက်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအစတွင် - ဤကိုယ်ဟန်အနေအထားသည်အနည်းဆုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါ့ရည်းစားကဘာကြောင့်လိင်ကိုကြောက်တာလဲ။ ငါထင်တာကတော့သူမမှာမကောင်းမွန်သော၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိရုံသာမကသူမသည်သမ္မာသတိရှိစဉ်ကပင်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 69 ကိုယ်ဟန်အနေအထားကဘာလဲ?
အဆိုပါ hymen အမြဲလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းပျက်စီးဖြစ်သည်မဟုတ်လော
လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်း hymen သည်အမြဲတစေပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါလား။ ဟုတ်တယ်၊ အချို့မိန်းကလေးများသည်ခဏတာလိင်ဆက်ဆံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း hymen ၏သမာဓိကိုမချိုးဖောက်ခဲ့ပါ။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 48 Next ကို 's Page
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,304 စက္ကန့်ကျော် Generate ။